မနေနိုင်လို့ပြောရသည်(ပင်မှည့်ပင် အမှတ်မမှားစေချင်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » မနေနိုင်လို့ပြောရသည်(ပင်မှည့်ပင် အမှတ်မမှားစေချင်)
Posted by Novy on Sep 27, 2012 in Short Story | 43 comments
စာမျက်နှာ ၇ မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ “ဆေးဖက်ဝင် ပင်မှည့်သီး”
ဆိုတဲ့ ပင်မှည့်သီး ဆေးဖက်ဝင်ပုံကိုရေးထားပါတယ်
“အပင်က၁၅ပေခန့် အမြင့်ရှိပြီး “ လို့ဖေါ်ပြထားပါတယ်
မနိုလည်း ပင်မှည့်ပင်ကို စိုက်ဘူးပါတယ် (ပင်မှည့်သီးဖျော်ရည်ကို ကြိုက်လို့ပါ)
လက်ရှိလည်းစိုက်ထားပါတယ် ပင်မှည့်ပင်က နွယ်ပင် အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်
စာရေးသူးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မသိရင် မသေချာရင် ဒီအချက်ကိုထဲ့မရေးသင့်ပါဘူး
အပင်ကို မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အမှတ်မှားနိုင်ပါတယ်
နောက်နေ့ကြုံရင် အပင်ကို ဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖေါ်ပြပေးပါအုံးမယ်
တစ်လောကဘဲ နိုင်ဂံဒေါ်သဒင်းဇာဂနေပီး အမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့
လူသတ်မှု့လိုကိစ္စကို ဘာညာ တောင်းဘန်ပီးဘာဘီ
ဒဂယ်ဒေါ့ စတော်ဘယ်ရီပင်ဆိုဒါ မြန်မာ့ကျွန်းသစ်နဲ့ အပြိုင် သစ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိဘာဒယ်
ဓာတ်ပုံတင်ပေးမှ နားရွက်ဆွဲပြီး လာကြည့်ခိုင်းလိုက်ဦးမယ်
နွယ်တက်နေတာကို စာရေးသူက ပင်မှည့်ပင်ထင်နေလားမှ မသိတာ မနိုဗွီရယ်။
ခုပဲ မန့်တော့မလို့ …
အိုင်ဖုန်းဖိုက် ကြီး ပြပီး နိုကီယာလူမီယာ၉၂၀ ပါတဲ့….
မနိုရေ ကျမလည်း ပင်မှည့်ကြိုက်လို့ သောက်ဖြစ်တယ်။ အပင်တော့ မမြင်ဖူးဘူး။ မင်းကုန်းဘက်က အမျိူးတယောက်ကလည်း ပို့ပို့ပေးတယ်။ မနိုအပင်စိုက်တာ ၀ါသနာပါပုံပဲ။ စိုက်လို့လွယ်ရင် နည်းလေးရောပြောပါအုန်းနော်။
အစေ့လေးတွေကို မြေမှာကြဲလိုက်ရင်ရပြီ (ပန်းအိုးနဲ့ပျိုးလဲရပါတယ်)
အယ် သူက ၁၅ ပေလောက်ရှည်တဲ့ ၀ါးလုံးနဲ့ စင်တင် စိုက်ထားလားမှ မသိတာနော် …
ပင်မှည့်ပင်က ဘူးပင်တွေလိုမျိုး စင်နဲ့ စိုက်ရတဲ့ နွယ်ပင်လေးပါ …..
အရမ်းကြိုက်တယ် အနံ့လေးကလဲ မွှေး ၊ စားရတာလဲ အရသာလေးကကောင်းဆိုတော့ …
ပင်မှည့်ဆိုရင် ဖျော်ရည်လိုမျိုး မစားဖြစ်ဘူး .. အလုံးလိုက်ခွဲပြီး ဒီအတိုင်းစားရတာပိုကြိုက်လို့ …
ဘယ်လိုများဆေးဖက်ဝင်လဲ မသိဘူးနော် …
သူ့အနံ့လေးကို ကြိုက်တယ် အရသာရောပဲ
နွယ်ပင် ကိတ်စဆိုရင် ကိုအာဂ နဲ့သာ ရှင်းဗျို့
အင်းနော်… ဒါလေးတောင် မသိဘူးလား။ စာလည်းရေးနေပြီတော့များ.. ပြောပြလိုက် မမ..
မနော / buu kyoa
စာရေးသူလဲ အသုံးမကျ အဲဒီကြေးမုံသတင်းစာတိုက်က အဲဒီတာ ကလဲ အသုံးမကျ
ကိုပေ ပြောတာမှန်ဒယ်…ဒီကိစ္စ အဲလေ..နွယ်ပင်ကိစ္စ ဆိုဒေါ့
တားတားနွယ်ပင် နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။ တားတားရဲ့ နွယ်ပင် ကပင်မှဲ့ အမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲ ဆေးဘက်ဝင် နွယ်ပင်သာဖြစ်ပါကြောင်း အတိပေး အပ်တယ်။ နောက်နောင် နွယ်ပင် ကိစ္စအား မှားယွင်းစွာ ၊နားလည်မှုလွဲစွာ အသုံးပြုပါက
မစ္စတာမောင် အာဂ(မူလ ပထမ နွယ်ပင်ပိုင်ရှင်)
အမှားများကို ရှာဖွေ ရှင်းလင်းပေးပါသောကြောင့်
ကြေးမုံ အစား (ဦးကြောင်ကြီးကိုယ်စားပြောပေးခြင်းဟု မထင်စေချင်ပါ)
ပင်မှည့်သီးပင် မအိတို့အိမ်မှာလဲ အရင်ကရှိတယ်…
အိမ်ရှေ့ကစွယ်တော်ပင်ပေါ်ရယ် နောက်ဖေးခြံစည်းရိုးမှာ နွယ်တက်နေတာပါ…
ပိတ်စပါးပါး ထဲခွဲထည့် အရည်ညှစ်ပြီး သကြားနဲ့ ဖျော်သောက်ပါတယ်…
အနံ့ လဲမွှေး အရသာချိုချို ချဉ်ချဉ် အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဖျော်ရည်ပေါ့…
ခုတော့ ၁၅ ပေလောက်မြင့်တယ်တဲ့လား…
ရွှေကြည်တို့ အဘရွာမှာ အဒေါ်တယောက်အိမ်မှာစိုက်ထားပါတယ်။ သရက်ပင်ပေါ်ပဲနွယ်တက်ခိုင်းထားတယ်။ အသီးကိုထိပ်ဝလှပ်ပြီး သကြားထည့် ဇွန်းသေးလေးနဲ့မွှေပြီးစားဖြစ်တယ်အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ အခုတော့မစားရတာကြာပြီ။
အစေ့လေးတွေကို ဇကာနဲ့တိုက် ရတဲ့အနှစ်တွေကို သကြားလေးနဲ့ဖျော်ပြီး
မနိုရဲ့ … စင်ထိုးစိုက်လျှင် 15ပေ အမြင့်ထိ စိုက်လို့ ရတယ်လို့ ပြောတာဖြစ်မယ် … အဟိ …. ။
လှေခါးလေးထောင်ခူးရုံပဲ … ခွိခွိ ။
ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလောက်တော့ရေးပါရစေ။ အခုတင်တဲ့ သတင်းစာမှာ ပင်မှည့်သီးက သွေးတိုး၊ သွေးတက်တာ ကျစေကြောင်းအဓိကညွှန်းပါတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ပင်မှည့်သီးက အသားအရေခြောက်တာ ညိုတာတွေ၊ အဆီအစားများလို့ အီလည်လည်ဖြစ်တာတွေ၊ ကိုယ်တွင်းအပူကြီးတဲ့အချိန် ဥပမာ နွေရာသီတွေမှာ ပင်မှည့်သီး၊ ပင်မှည့်ဖျော်ရည်သောက်ခြင်းက သက်သာကောင်းစေပါတယ်၊ ပင်မှည့်ဖျော်ရည်ကို သကြားအစား ပျားရည်နဲ့ဖျော်ရင် ဆေးအာနိသင်ပိုကောင်းတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါကြောင်းမျှဝေပါ၏။
ကျေးဇူးပါနော် အခုလိုဆေးဖတ်ဝင်ပုံကို ပြောပြလို့
ပင်မှည့်သီးသောက်လို့ နိုဗွီ အသားလေးတွေလှနေတာဖြစ်မယ် :harr:
ပင်မှည့်ပင် က နွယ်ပင် အမျိုးအစားဆိုတော့
ဥအာဂ ဒေါ့ဖြင့် ပွဒါဘဲ …
ပင်မှည့်ပင် နဲ့တော့ မသိပါဘူး ..
ပို့စ်ထဲမှာ ပါသလိုပါပဲ စတော်ဘယ်ရီပင်အောက်မှာ ဆိုပြီး အမှတ်မှားခဲ့ဖူးပါတယ် …
စတော်ဘယ်ရီပင်အောက်မှာ တူနှစ်ကိုယ် ချိန်းတွေ့တာ ဘာညာ သာရကာ ပေါ့ဗျာ ..
ခြောက်မျက်နှာရေ. မနိုကတော့ စတော်ဘယ်ရီပင်အောက်မှာ
ကျေးကျေးပါ နိုဗွီ ။ ကျွန်တော်လည်း သတင်းစာထဲ ဖတ်ရတော့ ငါသိတာ ပင်မှည့် ပင်ကတော့ နွယ်ပင် ပါ ။ သူ့ ပင်မှည့် က ဘယ်လို ပင်မှည့်ပင်ပါလဲ ။ အခေါ်တူ လို့များလား စဉ်းစား မိလိုက်သေးတယ် ။ ရှမ်းလို ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ ကိုယ်မသိတဲ့ အပင်များလားလို့ ..
CJ ထူးလည်း သတင်းစာဖတ်မိတယ်ပေါ့
နိုဗွီတို ဒဂုံကခြံမှာလဲ ၂၅ပေလောက်မြင့်တဲ့ ပျဉ်မပင်ပေါ်ကိုနွယ်တက်ခိုင်းလိုက်တာပဲ
ဒီပိတ်ရက် ဒဂုံသွားရင်းနဲ့ အသီးရင့်နေရင်ခူးလာပေးပါ့မယ်
သီးသန့် တော့မခူးပါနဲ့ ဗျာ အားနာစရာ
ကျနော်က ရန်ကုန်မှာရှိခဲတယ် ။ ခရီးများနေလို့ 
zymoasis@gmail.com ပါ ။
ပင်မှည့်သီးကြိုက်လို့ အိမ်မှာလည်း စိုက်ဖူးတယ်။
အပင်ကြီးကို နွယ်တက်ပြီး သီးတာကို အဲဒီအပင်ကြီးက သီးတာလို့ ထင်သွားဟန်တူပါရဲ့ မနိုရေ။
စိုက်စရာ နေရာမရှိလို့စိုက်လို့ မရပါဗျာ
သို့ သော်လည်း ကျောက်မဲမှာသောက်ခဲ့ ဖူးကတည်းက အလွန်
နှစ်သက်တယ်ဗျို့  ။
ရန်ကုန်မှာ ဝယ်လို့ ရမည့် နေရာလေးများညွှန်ကြားပါဦးဗျာ ။
ကိုရင်ဆာမိရှင့် ၀ယ်မနေနဲ့ မနိုဆီမှာသွားတောင်းသောက်
ဟွန်း ရွှေကြည်နော် ဆနွင်းမကင်းလုပ်စားပစ်လိုက်မယ်
အမှန်က ပင်မှည့်က နွယ်ပင်အမျိုးအစားပါ ( ဂနဲ့တော့ ဘာမှဆိုင်ဝူးနော် )
နွယ်ပင်လည်း ပင်မှည့်ဖျော်ရည်ဆို အရမ်းကြိုက်တာ အပင်ကိုစိုက်ချင်ပင်မယ့် နေရာမရှိလို့
တားတားရဲ့ ပင်မှည့်မဟုတ်တဲ့ ဆေးဘက်ဝင် နွယ်ပင်လေးကို မူပိုင်ခွင့် မထိရဲ့ပေါင်ရှင်
ဒါမှ တို့ နိုဗွီ ကွ။
ဒီလိုထောက်ပြ နိုင်တာ များလာရင် တော်ရုံ ဗဟုသုတ မပြည့်ဘဲ နဲ့ ရွှီးပြီး မရေးရဲ မှာ။
ဒီနောက် သူတို့ လဲ အလုပ်တာဝန်အတွက် စာများများဖတ်လာနိုင်ကြပါတယ်။
လေးစားပါတယ် နိုဗွီ ရေ။ :hee:
လေးစားပါတယ် နိုဗွီ ရေ လို့တွေ့လိုက်တော့